Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0712 lah
Ny ilàna ny fandraisan'ny tena manokana fiadiana
Alahady 11 Nov.
Ambaran’i Paoly ao amin’ny Efes. 6:12 fa ny fiainana kristianina, dia ady, ka hoy izy hoe: “fa isika (…)mitolona”. Mariho fa mampiasa ny mpisolo tenan’ny maro an’isa izy. Izao no fivakiny ara-bakiteny: “Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà”. Tafiditra ao avokoa ny Kristianina rehetra tsy ankanavaka. Mampirisika ny mpamaky azy izy ao amin’ny andininy 13 mba handray ny fiadian’ Andriamanitra rehetra. Ny fiadian’Andriamanitra no ilaina raisintsika ary efa vonona ny hampiasaintsika izany. Atombok’i Paoly amin’ny hoe: “ary noho izany dia,” ny andininy. Milaza izany fa tena ilaina tokoa ny fiadiana toy izany eo anatrehan’ny toetr’ilay tolona. Soritsoritan’i Paoly àry ny fomba tokony hitafian’ny Kristianina ny fiadiana ka noraisiny an’ohatra tamin’izany ny an’ny miaramila rômanina rehefa handeha hiantafika.
Diniho amim-pitandremana tsara ny sary an’ohatra ao amin’ny Efes. 6:14-17. Inona amin’io sary io no manaitra ny sainao miaraka amin’ny fahafantarana fa tsy vitan’ny hoe ny Kristianina rehetra ihany no tafiditra ao fa ny isam-batan’olona tsirairay avy mihitsy? Ho anao, inona no hevitr’izany hoe ianao mihitsy no manana ady izay tsy maintsy hidiranao an-tsehatra manokana?
Tany am-boalohany ny teny nandikana ny hoe “tolona” dia nilaza ireny ady totohondry mivantana ireny mihitsy, saingy tatỳ aoriana kosa izany dia nentina nilazana ireo karazana ady hafa ihany koa. Araka ny ampiasana azy eto, io teny io dia milaza mazava tsara ny maha-an’ny isam-batan’olona izany ady izany, na dia tsy hita taratra eto aza ny ady mivantana ara-bakiteny izay ifampitolomana amin’ny demonia.
Miresaka momba io maha-tafiditra ny isam-batan’olona eo amin’ny lafiny ara-panahy io ny fanoharana mikasika ireo virjiny folo ao amin’ny Mat. 25:1-13, na dia ao anatina tontolon-kevitra samy hafa amin’izay dinihintsika eto aza izany. Ny toe-panahin’ireo virjiny dimy dia ampifandraisin’i Ellen White amin’ny fanoritsoritan’i Paoly ny sokajin’ireo olona velona amin’ny andro farany izay manana ny endriky ny toe-panahy araka an’Andriamanitra nefa mandà ny heriny (2 Tim. 3:1-5). “Io antokon’olona io no hita miantsoantso hoe: ‘Miadana sy mandry fahizay’ (Zak. 1:11). Mandrotsirotsy ny fony amin’ny fiadanana izy ka tsy manam-po loza. Rehefa taitra tampoka amin’izany torimaso izany izy, dia mahatsapa fahantrana mafy, ary mitalaho amin’ny hafa hameno ny banga eo aminy; nefa eo amin’ny ara-panahy, dia tsy misy olona afaka manohitra ny tsy fahampian’ny hafa. Nomena maimaim-poana ho an’ny fanahy tsirairay ny fahasoavan’Andriamanitra.” – HF, t. 430.
Inona avy ireo zavatra sasany izay ianao irery ihany no afaka manao izany ho an’ny tenanao fa tsy ny hafa velively? (Ohatra, tsy misy olona afaka hihinana ny sakafonao ho anao, sa misy afaka manao izany?) Ahoana no hampiharanao io fitsipika io amin’ny tokony handraisan’ny tsirairay avy ny fiadiana momba ilay ady ara-panahy mahakasika antsika rehetra?